जाडो, वसन्त, ग्रीष्मकालीन, पतन: यो भव्य खेलले तपाईंलाई सबैको अनुभव गर्न अनुमति दिन्छ!4ऋतु चिनियाँ चक्र चक्रको प्रतिनिधित्व गर्दा समयको प्रवाह मार्फत अविश्वसनीय यात्रा हो। सबै पशु चिन्हहरू समावेश छन्, एक मनमोहक 3D अवतार द्वारा प्रतिनिधित्व। हरेक 30 स्पिनको साथ, प्रत्येक प्रतिनिधि जनावरको पछाडिको मौका हुनेछ सुनको र तपाईलाई 10x फिर्ता दिनुहोस! गोल्डन पशुलाई चल्ने पशु चिन्हले चांदी बन्छ र एक 5x रिटर्न प्रदान गर्दछ। एक सुन्दर पृष्ठभूमि संग कि मौसमहरु को परिवर्तन संग बदलाव,4SEASONS सुविधाहरु को combos को सबै भन्दा डिजाइन, गोल्डन लकी बिल्ली जंगहरु र उदार यिन यिंग मुक्त स्पिन बनाउन को लागि डिजाइन combos ब्लक। जब तपाईं4सत्रहरू प्ले गर्नुहुन्छ समयको पासोमा साक्षी दिनुहोस्!
4 मौसमहरु अपडेट गरिएको: फेब्रुअरी 7, 2019 लेखक: आमिर Berrey
14मौसमहरु
2.0.0.1 जाडो वन
2.0.0.2 हीरा घाटी
2.0.0.3 समुद्री डाकू को खजाने डिलक्स
2.0.0.4 कला को कला
2.0.0.6 सुपर अस्सी
2.0.0.7 मानिक लाखौं
2.0.0.8 रामेनेस को पिरामिड